स्वास्थ्य – Page3– shubhabihani
‘स्क्रब टाइफस‘का कारण कैलाली मा दुईको मृत्यु
धनगढी, २ कात्तिक । ‘स्क्रब टाइफस’ रोगबाट कैलालीमा गएको डेढ महिनायता दुईजनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा पहलमानपुर गाविसककी १५ वर्षीया कृष्णा बोगटी र फुलवारी गाविसका २४ वर्षीय समुन रानाभाट रहेका छन् ।
बोगटीको गत भदौ १३ गते र रानाभाटको भदौ २५ गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर हरिप्रसाद भट्टले बताउनुभयो ।
गएको साउन महिनायता मात्रै सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचारका लागि आएका झण्डै दुई सयभन्दा बढी बिरामीको रगत परीक्षण गर्दा ९० जनामा ‘स्क्रब टाइफस’ देखापरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
उपचारका लागि कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेल्धुरा र अछाम जिल्लाबाट अस्पताल आएका बिरामीमा यो रोग देखा परेको हो ।
मुसामा लाग्ने एक प्रकारको किर्ना नामक किराको टोकाइबाट सङ्क्रमण हुने यो रोग लागेमा धेरै ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, किर्नाले टोकेको शरीरको भागमा रातो डाबर जस्तो दाग देखिनेलगायत लक्षण देखिने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
गत वर्ष यो रोगबाट ५६ जना सङ्क्रमित भएको पाइएकोमा दुईजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको तथ्याङ्क जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग छ । रासस
२३ असोज, एजेन्सी ।
बेलायतका वैज्ञानिकहरुले गरेको एक अध्ययनले रात्रि सेवामा काम गर्ने महिलाहरूमा स्तन क्यान्सरको जोखिम कम भएको देखाएको छ ।
“हाम्रो अध्ययनबाट जो महिला लामो समयको रात्रिकालिन सेवामा काम गर्दछन्, त्यस्ता महिलाहरूमा स्तन क्यान्सरको सम्भावना कम हुने देखिएको छ,” अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको क्यान्सर इपिडिमियोलोजी इकाईका वैज्ञानिक तथा प्रमुख लेखक रुथ ट्राभिसले भने।
“रात्रि सेवामा काम गर्ने र दिवा सेवामा काम गर्ने महिलाहरुकाबीचमा तुलनात्मक अध्ययन गर्दा अध्ययनमा समावेश रात्रि सेवाका महिलामा स्तन क्यानसर निकै काम देखिएको वा देखिदै नदेखिएको पाइयो,” एचएसइका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार एन्ड्रेव कुरानले भने ।
यसरी प्रयोग गर्नुहोस् स्मार्टफोन, नत्र मेरुदण्डको समस्या हुनसक्छ
१६ असाज, काठमाडौ । स्मार्टफोन जसरी दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनिरहेको छ, त्यसैगरी यसले प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पनि पारिरहेको छ ।
तपाइँले कहिल्यै कल्पना गर्नुभएको छ कि, स्मार्टफोन प्रयोगगर्दा ढाडको समस्या हुनसक्छ भनेर ? स्मार्टफोनको प्रयोगले ढाड तथा घाँटी दुख्ने समस्या देखिएको छ भने सचेत हुनुहोस् यसले तपाइँको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्नसक्छ ।
यसो हुनुको मुख्य कारण हो- पोस्चर अर्थात तपाइँको आसन । विशेषगरी स्मार्टफोन तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानको निरन्तरको प्रयोगका क्रममा एउटा मानिसमा दिनमा कम्तीमा चार घण्टा यस्ता अप्राकृतिक तथा खराब आसनमा आˆनो समय खर्चिरहेका हुन्छन् ।
यसबाट बच्न तथा बचाउन स्मार्ट फोनको प्रयोग गर्दा कसरी बस्ने भन्नेबारे बिज्ञहरुले पत्ता लगाएका सुझाव तपाइँलाई उपयोगी हुनसक्छ ।
१. आसन (३० डिग्री, भार-१८ केजी ) २. आसन (६० डिग्री, भार- २७ केजी)
यो मुद्राको आसनमा स्मार्टफोन चलाउँदा तपाईको शरीरले आˆनो सम्पूर्ण भार मेरुदण्डमा पर्न जान्छ जसले फोक्सो लगायत हाम्रो शरीरको महत्वपूर्ण भागलाई असर पार्ने गर्छ । तपाइँको आसनअनुसार मेरुदण्डमा २७ केजीसम्मको भार पर्न जान्छ ।
विभिन्न अनुसन्धानले एउटा व्यक्तिको शरीरीक मुद्राले उसको भावनात्मक अवस्थाबारे थाहा पाउन सकिन्छ भनेर देखाइसकेको छ । उदाहरणको लागि हामी डिप्रेशनलाई लिन सक्छौ । विशेषगरी डिप्रेशनको शिकार भएका व्यक्तिहरुको बसाई हेरेर नै हामी उसका मनको अवस्था थाहा पाउन सक्छौ । पहिले-पहिले वृद्धवृद्धामात्र यस्ता समस्याबाट ग्रस्त हुने मान्यता रहेको थियो । तर, पछिल्लो समय यो समस्या युवाहरुमा बढी देखिन थालेको छ ।
यस्ता समस्या भएका व्यक्तिमा घाँटी तन्कने, जिउँ कुपि्रने तथा काँध झुक्ने समस्या हुने गर्दछ ।
जबकी सही मुद्राको आसनले तनाव कम गर्ने मात्र नभएर तपाईका कार्य क्षमताको वृद्धि गर्न समेत ठूलो भुमिका खेल्छ ।
कुनै पनि उपकरणको प्रयोग गर्दा घाँटीलाई निहुराउनुको साटो आखाँलाई तल झार्नुस् । त्यस्तै, स्कि्रनलाई माथि उचालेर उपकरणको प्रयोग गर्नुहोस् । यसले तपाइँको मेरुदण्डमा जम्मा पाँच केजीको भार पर्न जान्छ ।
आसन (० डिग्री, भार- ५ केजी)
ढाडको समस्या कम गर्ने पाँच साधारण तरीकाः
१. समय-समयमा मांशपेसीलाई तन्काउँदै , टाउकोलाई दायाँ बायाँ घुमाउने
२. बेलाबेलामा कुमको वरपर, घाँटीको छेउछाउ तथा काँधको दायाँबाया मालिस गर्ने
३. केही बेर उभिने, हात, खुट्टालाई तन्काउने र ढाडलाई दायाँबायाँ झुकाउने । यो प्रकृयाले घण्टौदेखि एउटा मुद्रामा बसेको मांशपेशीलाई केही हदसम्म भएपनि आराम दिने गर्छ ।
४. यदी तपाई १० मिनेट भन्दा बढी समयसम्म निरन्तर फोनमा हुनुहुन्छ भने चिउडोलाई घाँटीतर्फ निहुराउनुस् र कुमलाई थोरै केहीबेर घुमाउनुहोस् । १० सेकेन्डका लागि थामेर यो प्रकृयालाई केहीबेरसम्म दोहोर्‍याउनुहोस् ।
५.प्रत्येक पटक स्मार्ट फोनको प्रयोग गर्दा, याद गर्नुस् सही मुद्राको आसनले भविष्यमा तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न समस्याबाट बचाउन सक्छ ।
शुभबिहानी . कम एप आफ्नो मोबाइल मा डाउनलोड गर्नुहोस >>shubhabihani.com
तपाईले थाहै नपाउनु भएको फिटकिरीका १० फाइदा
फिटकिरीले केवल पानी मात्र सफा गर्दैन। यसले स्वास्थ्यमा पनि कयौं तरिकाले फाइदा गर्छ। यसको प्रयोगले विभिन्न रोगबाट बच्न सकिन्छ।
फिटकिरीमा म्याग्नेसियम सल्फेट हुन्छ। म्याग्नेसियम मानिसको कोषको महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जसले शरिरमा ३०० भन्दा बढी इन्जाइमलाई रेग्युलेट गरेर हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ।
मनतातो पानीमा फिटकिरी र कन्डिसनर समान मात्रामा मिलाएर कपालमा लगाउनुस्। १५-२० मिनेट पश्चात चिसो पानीले धुनुस्। हप्तामा एक पटक यस्तो गर्दा कपाल बाक्लो हुन्छ।
दुखेको हात वा खुट्टा दुई चम्मा फिटकिरी घोलेको पानीमा डुबाउनुस् दुखाइ कम हुन्छ।
म्याग्नेसियमले शरिरबाट हानिकारक पदार्थ निकाल्छ। तातो पानीमा एक कप फिटकिरी पाउडर हालेर १०-१५ मिनेट पछि त्यो पानीले नुहाउँनुस्। हप्तामा २-३ पटक यस्तो गर्दा छाला स्वच्छ बन्छ।
जाडो महिनामा ओठ लगायतको छाला फुट्ने समस्या अधिकांसले भोग्दै आएको हो। फिटकिरी, अलैचीको दाना एक साथ पिनेर छालामा लगाउँदा फुटेको सन्चो हुन्छ।
फिटकिरी पानी हप्तामा तीन पटक पिउँनुस्। शारिरीक अनि मानसिक तनाव कम गर्न यो निकै फलदायी हुन्छ।
फिटकिरी पानीले नुहाउँदा मुटुलाई पनि राम्रो गर्छ। साथै हृदयघातको सम्भावना समेत कम गर्छ।
चिसो मौसममा औला सुन्निने समस्या पनि फिटकिरीले समाधान गर्छ। मनतातो फिटकिरी पानीमा सुन्निएको औला डुबाउँदा राहत मिल्छ।
टन्सिनको समस्या छ भने फिटकिरी पानीले गारगर गर्दा छिटो सन्चो हुन्छ।
काटेको ठाउँबाट रगत बगेको छ भने फिटकिरी पानीले धुनुस् अनि फिटकिरको पाउडर लगाउनुस्। रगत बन्द हुन्छ। साथै बगेको रगत बन्द गर्न चिनी पनि निकै सहज घरेलु उपाय हो।
नेपालमा पनि देखियो चिकनगुनिया, कसरी बच्ने ? किट अभावमा रोग परीक्षणमा कठिनाई
११ असोज, काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा चिकनगुनियाका विरामीको संख्या बढीरहेका बेला नेपालमा पनि एक व्यक्तिमा चिकिनगुनियाको संक्रमण भेटिएको छ । गत साता चितवन घर भएकी एक महिलामा चिकनगुनिया संक्रमण भेटिएपछि नेपालमा पनि यो रोग भएको पुष्टि भएको हो ।
चिकनगुनिया जाँच गर्ने किट नेपालमा अभाव भएकाले यसको संक्रमण अझै कति जनामा छ भन्ने कुराको यकिन जानकारी छैन ।
चितवनकी ति संक्रमित महिला भने हाल आवश्यक उपचार पूरा गरी घर फर्किसकेकी शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुले जनाएको छ ।
अस्पतालका अनुसार सुरुमा जोर्नी दुख्ने, आँखाका गेडी दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने लगायतको समस्या देखिएपछि ति महिला जाँचका लागि अस्पताल पुगेकी थिइन् । अस्पतालले सुरुमा उनमा डेंगुको शंका गरिएको थियो तर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पुनः परीक्षण गर्दा चिकनगुनिया संक्रमण भएको पाइएको शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका कल्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन डा. अनुप बास्तोलाले बताए ।
‘ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीरका मांशपेशी दुख्ने लगायतका विभिन्न समस्या लिएर आएकी महिलाको रगत परीक्षणका क्रममा उनमा चिकनगुनिया भएको पाइएको थियो,’ डा. बास्तोलाले भने, ‘उनलाई आवश्यक उपचार गरी घर फर्काइसकेका छौं ।’
उनका अनुसार यो रोग एडिस नामक लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ । यसलाई एजिप्टी पनि भनिन्छ । यो लामखुट्टे डेंगु, जिका भाइरस तथा एलो फिवर (पहेलो ज्वरो) सार्नका लागि पनि चिनिने गर्दछ । नेपालमा जिका भाइरस र एलो फिवर अहिलेसम्म देखिएको छैन भने डेंगु केहि समय पहिले वीरगञ्जमा देखिएको थियो ।
के हो चिकनगुनिया ?
डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार अफ्रिकी मुलकमा जोर्नीको दुखाईका क्रममा कुप्रो पर्ने आसनलाई चिकनगुनिया भनिन्छ ।
एडिस नामक लामखुट्टेले धेरै मानिसलाई टोकेमा यो रोग मानिसमा देखा पर्ने गर्छ । विशेषगरी चिकनगुनिया सार्ने लामखुट्टेले जहिले पनि एकभन्दा बढी मानिसलाई टोक्ने भएकाले नै यसको संक्रमण पनि धेरै हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यो रोग १९५२ मा पहिलो पटक साउथन टान्जानियामा देखा परेको थियो । यो रोग अहिलेसम्म युरोप, अफ्रिका, एसिया लगायत विश्वका ६० भन्दा बढी देशहरुमा देखा परिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय यो रोगका कारण भारतमा हजारौं मानिस प्रभावित बनेका थिए । अहिले यो रोग नेपालमा पनि देखिएको हो । चिकनगुनिया फैलाउन लामखुट्टेले डंगुु पनि फैलाउने हुँदा यसबारे सजग हुन चिकित्सकको सुझाव छ ।
सामान्यतयाः चिकनगुनिया सार्ने लामखुट्टले टोकेको तीनदेखि सात दिनभित्र यसको लक्षण देखा पर्न सुरु हुन्छ ।चिकनगुनियाको संक्रमण भएमा मानिसलाई एक्कासी ज्वरो आउँछ । मांसपेशी बाउँडिने, शरीरका हड्डी दुख्ने, एक हप्तामै शरीर कमजोर हुने लगायतका समस्या देखिन्छ ।
चिकनगुनियाको संक्रमण भएमा मानिसमा उच्च ज्वरो आउँछ । ज्वरो एक्कासी बढेर १०४ डिग्रीसम्म पुग्नसक्छ । यसैगरी कम भोक लाग्नु, कमजोरी महसुस हुनु, टाउको दुख्नु, बेस्सरी जोर्नी दुख्नु, जोर्नी सुन्निनु यसका लक्षण हुन् । मांशपेशी दुख्नु, लगातार उल्टी हुनु, उल्टीमा रगत देखापर्नु पनि यस रोगका लक्षण हुन् ।
यो समस्या भएमा मानिस एकाएक विरामी भई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछ । यो रोग लागेमा मानिसको तत्काल मृत्यु भने हुँदैन ।
चिकनगुनिया डेंगु तथा मलेरिया जस्तै एक प्रकारको लामखुट्टेबाट मानिसमा सर्ने रोग हो । यो रोगको उपचार पद्दति खासै छैन । अझ भनौं चिकनगुनियाको अहिलेसम्म औषधि पत्ता लागेको छैन ।
त्यसैले लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु नै यो रोग लाग्नबाट बच्नु हो । त्यसबाहेक पानी प्रशस्त पिउने र शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन नदिन प्रशस्त झोलिलो पदार्थ सेवन गर्नुपर्दछ ।
ज्वरो घटाउन र जोर्नीको दुखाई कम गर्न सिटामोल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यो रोग लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने हुँदा लक्षण सुरु भएको पहिला हप्ता यो रगतमा देखिन्छ । जुन संक्रमित व्यक्तिको शरीरबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्न सक्दछ । त्यसैले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै जरुरी छ ।
लामखुट्टेबाट बच्न घरभित्र तथा बाहिर पानी जम्न नदिने, खाली भाँडाहरुलाई सकेसम्म घोप्ट्याएर राख्ने, विशेषगरी दिउँसोको समयमा चिकनगुनियाको संक्रमण धेरै हुने हुँदा बाहिर हिँड्दा शरीर ढाकिने लामो लुगा लगाउने र दिउँसो अथवा राति सुत्दा लामखुट्टे नछिर्ने झुलको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
गाढा रंगको लुगामा लामखुुट्टे आकर्षित हुने भएकाले लामखुट्टे लाग्ने समयमा हल्का रंगको लुगा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
यसबाहेक २४ घण्टासम्म पनि धेरै ज्वरो आएमा चिकित्सकलाई देखाउनु उचित हुन्छ ।
ज्वरो आउँदैमा चिकनगुनिया नै भयो भनेर आत्तिनुपर्दैन । किनकी सबै ज्वरो चिकनगुनिया हुँदैन । तर, उच्च ज्वरो आयो भने अस्पताल गएर जचाउँन भने ढिलाइ नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
तर, चिकनगुनियाको ज्वरो देखा पर्दैमा अस्पताल भर्ना भने हुनुपर्दैन । डिहाइड्रेसन (शरीरमा पानी कम हुनु)बाट बँच्नुपर्छ । त्यसका लागि धेरै पानी पिउनुपर्दछ । धेरै पानी पिउँदा पनि यो रोग निको हुन्छ ।
किट अभावमा रोग परीक्षणमा कठिनाई
नेपालमा एक व्यक्तिमा चिकनगुनियाको संक्रमण देखिएसँगै अन्य व्यक्तिमा पनि यो रोग सर्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।
तर चिकनगुनिया जाँच गर्ने किट अभावमा यसको संक्रमण अझै कति जनामा छ भन्ने कुराको यकिन जानकारी नभएको स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार हाल यो जाँच गर्ने किट केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकुमा मात्र छ । त्यसबाहेक, नेपालमा अन्य कतै पनि यो जाँच गर्ने उपकरण छैन । उपकरण नहुँदा चितवनमै पनि यस रोगका विरामी अरु भए-नभएको थाहा नभएको विभाग स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ ‘चितवनमै पनि यस रोगका विरामी छन् कि भनेर बुझ्ने प्रयास भएको थियो । तर त्यहाँका चिकित्सकले कीट अभावमा रोगको पहिचान गर्न कठिन भएको बताइरहेका छन् ।’
यद्यपी विभागले चितवन, जनस्वास्थय कार्यालयलाई संक्रमण हुन सक्ने ठाउँहरुको निरीक्षण गर्न र सजगता अपनाउन निर्देशन दिइसकेको बताएको छ ।
नवलपरासीमा झाडापखालाको प्रकोप, ९० परिवार प्रभावित
९ असोज, नवलपरासी । नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नम्बर ९ सिम्रेनी र भिम्रेनी गरी २ वटा गाउँमा झाडापखाला प्रकोप फैलिएको छ ।
एक सातादेखि फैलिएको झाडापखाला दिन दिनै फैलँदै गएको छ । झाडापखालाबाट मध्यविन्दु नगरपालिकाको सिम्रेनी र भिम्रेनीका दुई गाउँका १२ घरका सबै परिवार विरामी परेका छन् भने ९० घरभन्दा बढी घर प्रभावित भएका छन् ।
झाडापखालाबाट गाउँका ९० घरपरिवार प्रभावित बनेको स्थानीय बासिन्दा तथा लज्या खोला खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष सागर ढकालले जानकारी दिए ।
ढकालका अनुसार ९० घरधुरीमध्ये करीब १०/१२ घरपरवारका सबै विरामी परेका छन भने र अन्य घरपरिवारका २ देखि ३ जनासम्म विरामी परेका छन् ।
शुक्रवारबाट विरामी पर्नेहरुको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भएपनि उपचारमा कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।
गाउँमा झाडापखाला फैलिएपछि शनिवारबाट स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएपनि सामान्य जाँच गरेर जीवनजल मात्रै दिइएको ढकालले गुनासो गरे ।
सिम्रेनीका फूलमती कुमालले आफ्नो घरमा मात्रै ४ जना विरामी भएको बताइन् । उनले आफू पनि विरामी भएको र चोरमारा स्वास्थ्य चौकी झरेर उपचार गरेपछि निको भएको बताइन् ।
धाराको पानीमा खेतको पानी मिसिएको प्रदुषित पानी आएपछि यस्तो भएको गाउँलेहरुको अनुमान छ । फोहोर पानी पिउनासाथ वान्ता हुने पखाला लाग्ने गरेको छ ।
आइतबार भरतपुरबाट समेत स्वास्थ्यकर्मीको टोली आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले पियुस वितरण गरेका छन् भने पानीको मुहानमा पियुस लगायतका औषधि छर्किएको बताइएको छ ।
खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष खनालले खानेपानीको मूल, खोला किनार नजिक रहेकोले २ गते राति आएको बाढीले खानेपानीको मुहान बगाएर धमिलो पानी मिसिएको बताए । अहिले उक्त मुहानबाट पानी रोकिएको र स्थानीयले चुवाडी र इनारको पानी प्रयोग गरेको खनालले बताए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीका छवि गिरीले खबर पाएलगत्तै स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाएको र स्थिति नियन्त्रणमा आएपछि आइतबार दिउँसो टोली फर्किएको बताए । गाउका ९० घरपरिवारले २० वर्षदेखि उक्त मुलको पानी पिउँदै आएका छन् ।
मिर्गौला रोगका लागि आयुर्वेदिक उपचार ‘वरदान’ सावित
मिर्गौला समस्याका कारण धेरैले अकालमा जीवन गुमाउनुपरेका घटना पछिल्लो समयमा आइरहेका छन्। आयुर्वेद उपचारपद्धति मिर्गौला उपचारका लागि वरदान सावित हुँदै आएको छ।
आयुर्वेद उपचार पद्धतिले राम्रो स्वास्थलाभ लिएर पहिलेकै अवस्थामा खुसी जीवन बिताइरहेका धेरै मानिस छन्।
गत वैशाखमा काठमाडौँ नयाँबजारका ५७ वर्षीय टीका राणालाई असहज महसुस भयो। त्यसपछि उनी उपचारका लागि अस्पताल गए। डाक्टरको उत्तर सुनेर उनलाई झन् असजिलो भयो। उनले भने, ‘डाक्टरले दुवै मिर्गौला छैन भनेको सुन्दा म झसङ्ग भए, त्यही ढल्छु जस्तो भयो तर मैले त्यहाँ डायलासिस गरिनँ, आयुर्वेद उपचार गर्न आएँ।’
राणालाई उपचार गर्ने वैद्यलाई देख्दा भगवान् भेटेजस्तो महसुस हुन्छ आजभोलि। ‘जीवन दिने नै भगवान् हो, नयाँ जिन्दगी पाएर खुसी छु,’ हँसिलो मुहारमा उनले थपे। उनी पहिलाको जस्तै सम्पूर्ण काम गर्न सक्छन्।
कुपन्डोल गुरुद्वार नजिकै रहेको श्री गणेश आयुर्वेदीय औषधालय प्रालिमा पुगेर उनले परामर्श लिएर औषधि खान सुरु गरे। सुरुमा उनको क्रिटिनाइन ७.८ थियो। उपचारपछि क्रमशः २.९, २.८ हुँदै अहिले पाँच महिनामै सामान्य अवस्थाको जस्तै २.२ मा झरेको छ। मानिसको शरीरमा क्रिटिनाइन १.४ सामान्य मानिन्छ।
राणाजस्तै भक्तपुर ठिमी–१७ का ६४ वर्षीय लालबहादुर कार्कीलाई पनि आयुर्वेदिक औषधिले राम्रो सुधार भइरहेको छ। उनले उपचार गर्न सुरु गरेको दुई वर्ष भयो। ‘वैद्यले दिएको औषधिले राम्रो सुधार भएको छ,’ कार्कीका छोरा सुवास कार्कीले भने। सुरुमा उनको क्रिटिनाइन ४.४ थियो। अहिले २.२ छ।
मकवानपुरका २२ वर्षीय अरुण लामालाई आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगले निकै राम्रो भएको छ। एकवर्षअघि औषधि सुरु गर्दा उनको क्रिटिनाइन ६.८ थियो। अहिले ४.२ हुँदै २.१ मा झरेको छ।
‘दैवलाई पनि मिर्गौलाको रोग नलागोस्, कम हुँदैछ, ठीक हुन्छ, विस्तारै कम हुँदैछ,’ लामाले भने।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कृषि विभागका अध्यक्ष ६५ वर्षीय चित्रबहादुर श्रेष्ठले पनि आयुर्वेदिक औषधि निरन्तर सेवन गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, दाङका ५३ वर्षीय लीला दाहालले पनि आयुर्वेदिक औषधि नै सही लागेको सुनाए। उनले तीन वर्षदेखि मिर्गौलाको उपचार निरन्तर गराइरहेका छन्। उनको क्रिटिनाइन सुरुमा ३.४ थियो। अहिले २.१ छ।
आयुर्वेदिक उपचार हेमोडायलासिस नगरेकाका लागि मात्र गरिन्छ। सस्तो र घरमै बसेर उपचार गर्न सकिन्छ। मासिक रु पाँच हजारको औषधि प्रयोग गरी वैद्यको सल्लाहअनुसार खान नहुने भनिएका खाना नखाएमा छिट्टै कम हुँदै जान्छ।
गणेश आयुर्वेदीय औषधालय प्रालिका अध्यक्ष तथा वैद्य गणेशबहादुर राउतका अनुसार मिर्गौला खरावी प्रत्येकलाई फरक फरक कारणले हुन्छ। थाहा पाउनका लागि बिरामीको सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ। मिर्गौला रोगका लक्ष्यण पिसाब कम लाग्ने, पानी कमी, वाकवाकी लाग्ने र गोडा सुन्निने हुन्छ।
‘आयुर्वेद पद्धतिबाट उपचार गर्दा बिरामीको गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहीअनुसार उपचार पद्धति आवश्यक छ, परामर्शपछि चेतना र औषधि समानान्तर भएमात्रै राम्रो परिणाम आउँछ,’ वैद्य राउतले भने।
वैद्य राउतले २०४५/४६ सालमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहायतामा १५ महिने आयुर्वेदीय तालिम लिएर निरन्तर खोज अनुसन्धानमा लागिपरी मिर्गौला खराबी हुँदा क्रिटिनाइन बढ्न नदिन काम गरिरहेका छन्। उनको उपचार पद्धतिबाट क्रिटिनाइन भर्खर बढ्न सुरु भएकालाई दुई/चार महिनामा सामान्य हुन्छ। अत्यधिक बढेको छ भने केही समय लाग्न सक्छ।
उनका अनुसार यो पद्धतिबाट उपचार गर्दा ज्यान जोगिन्छ। आर्थिक भारबाट जोगिन सकिन्छ। घरमै बसीबसी स्वास्थ्य लाभ गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा मिर्गौला पीडितका आफन्तको पीडा कम हुन्छ।
आयुर्वेदीय विज्ञानद्वारा, आधुनिक मेडिकल ल्याबद्वारा र बिरामीको आफ्नो अनुभूति समयमै सम्पर्क राखेमा मिर्गौला समस्या आवश्यकता विशेष परामर्श लिएमा बिरामीले स्वच्छ जीवन जीउन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार आयुर्वेद मौलिक उपचार पद्धति हो। एकातिर राज्यले आयुर्वेद उपचारलाई वैकल्पिक पद्धतिमा राख्दा यो ओझेलमा परेको छ भने अर्कातिर नेपालमा मिर्गौला रोग राष्ट्रिय समस्याका रुपमा विकसित भइरहेको छ। मिर्गौलाका बिरामी घर खेत सर्वस्व बुझाएर पनि अलपत्र परिरहेका छन्।
पश्चिमा मुलुकहरु आयुर्वेद खोजिरहेका छन् तर नेपालमा आयुर्वेदको मातृभूमि भएर पनि राज्यले त्यसको संरक्षण नगरेको राउतको गुनासो छ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकास भएमा चिकित्सा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने उनको धारणा छ। रासस
एजेन्सी । यदी तपाई सुरक्षित सेक्स गर्नु हुँदैन भने अब तपाई जोखिममा पर्न सक्नु हुन्छ । अर्थात् एड्ससहित यौन रोगका अन्य जोखिमहरु त यसअघि बाटै थिए नै अब सेक्सकै कारण अर्को गम्भीर खतरा समेत विश्वमा भित्रिएको तथ्य पत्ता लागेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तटीयमुलुक ‘हवाई’मा ‘सेक्स सुपरबग’ नामक एक खतरनाक जीवाणुको दुईवटा मामिला बाहिर आएको छ । जसले विश्वभरका चिकित्सकलाई चिन्तित बनाएको छ ।हवाईका स्वास्थ्य विभाग अधिकारीहरुले ‘सुपरबग’ एड्स फैलाउने जीवाणु ‘एचआईभी’ भन्दा पनि खतरनाक भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले यसबाट बच्न मुस्किल हुने बताएका छन् । हवाईको स्वास्थ्य विभागले सुपरबगको रोकथामका लागि नयाँ ‘एन्टिबायोटिक’ पत्ता लगाउन सरकारसँग ५४ मिलियन डलर राशी माग गरेका छन् । वरिष्ठ चिकित्सकहरुले सुपरबगलाई कुनै पनि औषधीले छुन नसक्ने बताएका छन् । चिकित्सकका अनुसार सेक्स सुपरबगलाई ‘गोनोरिया एच ०४१’ नामबाट पनि चिनिन्छ ।
सुपरबगको पहिलो पहिचान वर्ष सन् २०११ मा जापानमा भएको थियो । यसपछि यो हवाईमा फैलिएको थियो । अहिले भने क्यालिफोर्निया र नर्वेतिर पनि यसको संक्रमण फैलिन सुरु भएको अनुमान गरिएको छ । हवाईमा पहिलो पटक सन् २०११ मा सेक्स सुपरबगको मामिला एक युवतीमा भेटिएको थियो । हवाईका चिकित्सकहरुले पूरा देशभरी यसबाट सुरक्षित रहन सल्लाह दिएका छन् । चिकित्सकहरुले सुपरबगबाट विशेष सचेत रहन आग्रह गर्दै यसको जीवाणु धेरै आक्रामक भएको बताएका छन् ।
यो द्रुत गतिमा फैलिने र कम समयमा नै असर देखाउने खालको भएको चिकित्सकहरुको भनाई छ । विशेषज्ञहरुले सदैव सुरक्षित सेक्स गरेको खण्डमा यसबाट जोगिन सक्ने जनाएका छन् । जीवाणु देखिएको मुलुक हवाईमा कोहीसँग पनि नयाँ सम्बन्ध बनाउनुअघि पहिले आफ्नो ‘पाटर्नर’को शारीरिक जाँच गराउन सल्लाह दिइएको छ ।
म १७ वर्षीया युवती हुँ । मलाई रात परेपछि बढी उत्तेजना फिल हुन्छ । किन होला ? – डा. राजेन्द्र भद्रा
५९०४ यौन भावनाको व्यवस्थापन हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यौन उत्तेजना एउटा सामान्य कुरा हो र यो विशेष गरेर तपाईंको जस्तो किशोरावस्थामा तीव्र हुन्छ । दिउँसो अन्य काममा अलमलिए पनि राति एक्लै हुँदा यसले बढी पिरोलेको हुनुपर्छ । आफूमा आउने यौनचाहना र त्यसलाई शान्त पार्न के गर्न हुन्छ, के गर्न हँुदैन जस्तो कुरामा अलमलसमेत हुन सक्छ ।
यौन आनन्द प्राप्त गर्ने वैकल्पिक उपाय
अव महिला विना नै पुरुषले बच्चा जन्माउन सक्ने !
बैज्ञानिकहरुले अव महिला विना नै पुरुषले बच्चा जन्माउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताएका छन् । मुसामा गरिएको एक अध्यनबाट यस्तो सम्भावना दिएको बैज्ञानिकहरुको भनाइ छ ।
केवल शुक्राणुको मद्दत लिएर यो परीक्षण गरिएको थियो । नेचर कम्युनिकेशन जर्नलमा प्रकाशित शोधको निष्कर्षमा भविष्यमा बच्चा पाउनका लागि महिलाको आवश्यकता नपर्ने सम्भावना औल्याइएको छ ।
बाथ युनिभर्सिटीका बैज्ञानिकहरुले एक अनषेचित अण्डाको प्रयोग गरेर रसायनको मद्धतबाट नक्कली भ्रुण पैदा गरेका थिए । यो नक्कली जिवित भ्रुणमा आम कोशिकामा जस्तै विभाजन हुने पक्रिया देखियो ।
शोधकर्ताहरुले मुसामा सफल भएको यो परीक्षण मानिसमा पनि सुदुर भविष्यमा लागु हुन सक्ने बताएका छन् ।
यो प्रक्रियामा कुनै पनि शुक्राणुबाट भ्रुण पैदा गर्नका लागि महिलाको आवश्यकता पर्दैन । भ्रुण उत्पादनका लागि रसायनको प्रयोग गर्न सकिने बैज्ञानिकहरुको आशा छ ।